सुनको मूल्य | Ratopati
सार्वजनिक बिदाका कारण बुधबार सुनचाँदीको मूल्य यथावत access_timeजेठ १२, २०७८
आज २५६५ औं बुद्ध जयन्ती । सार्वजनिक विदाका कारण आज नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्यमा कुनै हेरफेर गरिएको छैन । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज बुधबार सुनचाँदीको मूल्य गत मंगलबारकै मूल्य कायम गरिएको हो । महासंघका अनुसार आज पनि छापावाल सुन प्रत...
आज सुनको मूल्य बढ्यो access_timeमंसिर १८, २०७७
स्थानीय बजारमा आज सुनको मूल्य प्रतितोला रु एक हजार ६०० ले उकालो लागेको छ । बुधबारका तुलनामा आज छापावाला सुन प्रतितोला रु एक हजार ६०० ले वृद्धि भई रु ९२ हजार ६०० मा कारोवार भएको छ । बुधबार छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला रु ९१ हजारमा कारोवार भएको थियो ...
सुनको मूल्य तोलामा ५०० ले घट्यो access_timeअसार १९, २०७७
काठमाडौं । नेपाली बजारमा शुक्रबार सुनको मूल्य तोलामा ५०० रुपैयाँले घटेको छ । बिहीबार तोलामा ९१ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य शुक्रबार तोलामा ९० हजार ५०० रुपैयाँमा कारोबार भएको हो । यस्तै शुक्रबार ९० हजार ६५ रुपैयाँमा कारोबार भ...
आज घट्यो सुनको मूल्य access_timeअसार १२, २०७७
काठमाडौं – सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सुनको मूल्य घटेको जनाएको छ । शुक्रबार महासंघले नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घटेको जनाएको हो । महासंघका अनुसार बिहिबार प्रतितोला ९१ हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छापावाल सुनको मूल्य शुक्रबार प्रति...
सुनको मूल्य ९० हजार नाघ्यो access_timeअसार ८, २०७७
काठमाडौं – सुनको मूल्य ९० हजारभन्दा माथि पुगेको छ । सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सोमबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बढेको जानकारी दिएको छ । महासंघका अनुसार आइतबार प्रतितोला ९० हजार ६ सयमा कारोबार भइरहेको छापावाल सुनको मूल्य सोमबार प्रतितोलामा ४ सय ...
कोरोना भाइरसको असरले सुन हालसम्मकै महँगो, मूल्य अझै बढ्ने access_timeफागुन ७, २०७६
चीनको वुहान प्रान्तबाट फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रभाव सुन बजारमा पनि परेको छ । कोरोना भाइरसको प्रकोप बढ्दै जाँदा अन्य आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएसँगै विश्वका लगानीकर्ता सुन बजारमा आकर्षित भएकाले सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मङ्गलबार ...
फेरि घट्यो सुनको मूल्य access_timeमाघ १५, २०७६
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा आज सुनको मूल्य ओरालो लागेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार नेपाली बजारमा आज सुनको भाउ प्रतितोला रु ४०० ले घटेको छ । महासङ्घले छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला रु ७५ हजार ६०० र तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला रु ७५ हजार ३०० कायम...
फेरि बढ्यो सुनको मूल्य access_timeमाघ १३, २०७६
काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य प्रतितोला रु ५०० ले वृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला रु ७६ हजार र तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला रु ७५ हजार ५०० पुगेको छ । गत शुक्रबारको तुलनामा आइतबार सुन प्...
सुनको मूल्य फेरि बढेको छ । सोमबार सुनको मूल्य ५ सयले बढेको हो । सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य ७६ हजार पुगेको छ । हिजो आइतबार ७५ हजार ५ सयमा सुनको कारोबार भएको थियो । छापावाल सुन प्रति दशग्राम ६५ हजार १ सय ६० अर्थात तोलाको ...
सुनको मूल्यसँगै बढ्दो तस्करी access_timeपुस २७, २०७६
नेपाली बजारमा सुनको मूल्य उकालो लागेसँगै तस्करी भएर भित्रने क्रम पनि बढेको छ । विगत तीन महिनामा सुनको मूल्य उकालो लागपछि त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलमा तस्करी भएर आएको सुन पक्राउ पर्ने क्रम पनि बढेको छ । गत असोजदेखिको तथ्याङ्क हेर्दा त्रिभुवन विमानस्थलमा असोजमा द...
सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट access_timeपुस २५, २०७६
काठमाडौं । पछिल्लो समय लगातार उकालो लाग्दै आएको सुनको मूल्य पुनः ओरालो लाग्न थालेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज सुनको मूल्य प्रतितोला रु ९०० ले घटेको छ । बुधबारको तुलनामा बिहीबार पनि प्रतितोला रु एक हजारले सुनको मूल्य घटेको थियो । आज...
आज सुनको मूल्य कति छ ? access_timeपुस २२, २०७६
आज सुनको मूल्य ५ सयले घटेको छ । केही दिनदेखि निरन्तर उकालो लागेको सुनको मूल्य मंगलबार घटेको हो । सोमबार बढेर ७६ हजार पुगेको सुनको मुल्य आज ५ सय घटेर तोलाको ७५ हजार ५ सयमा कारोबार भइरहेको छ । सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार तेजावी सुन भने ७५ हजार २ स...
सुनको बिक्री ७५ प्रतिशतले घट्यो, सुन किन्नेभन्दा बिक्री गर्ने बढे access_timeपुस २१, २०७६
काठमाडौं । सुनको मूल्य लगातार उकालो लागेसँगै स्थानीय बजारमा सुनको खपत ह्वात्तै घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार पछिल्लो समय सुनको व्यापार ७५ प्रतिशतले घटेको छ । दैनिक करिब २५ देखि ३० किलो सुन खपत हुँदै आएको नेपाली बजारमा अहिले मुस्किलले १० किलो...
विश्व अर्थतन्त्र अनिश्चितातर्फ मोडिँदै, सुरक्षण खोज्दा सुन र डलर दुवैको मूल्य बढ्यो access_timeपुस २१, २०७६
काठमाडौँ । केही दिनयता बजारमा सुनको मूल्य आकासिएको छ । गत आइतबार मात्र एकै दिन तोलामा एक हजार रुपैयाँ बढेर सुनको भाउ ७५ हजार ५ सय रुपैयाँ पुग्यो । जुन अहिलेसम्मकै उच्च दर हो । आज सोमबार पनि सुनको भाउले सोही दरको निरन्तरता पाएको छ । सुनको यो मूल्य वृद्धि कुनै स...
आज कति छ सुन चाँदीको मूल्य ? access_timeअसोज ६, २०७६
सोमबार (असोज ६) सुन तोलामा ७१ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । हिजो पनि यहि मूल्यमा कारोबार भएको थियो । यस्तै, तेजावी सुन प्रतितोला ७१ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । यता, चाँदीको मूल्य प्रतित...
आज कति छ सुनचाँदीको मूल्य ? access_timeभदौ ३१, २०७६
काठमाडौं– मंगलबार सुनको भाउ स्थिर रहेको छ। सोमबार ७१ हजार ३०० मा कारोबार भएको छापावाल सुनको भाउ मंगलबार पनि सोही मूल्यमा कारोबार भएको हो । यस्तै तेजावी सुन तोलामा ७१ हजारमा कारोबार भएको छ । यस्तै चाँदी मंगलबार तोलामा ८...
सुनको मूल्य घट्न थाल्यो access_timeभदौ २९, २०७६
सुनको मूल्य आइतबार (भदौ २९) घटेको छ । तोलामा ४ सय रुपैयाँले घटेको सुन ७० हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । अघिल्लो दिन ७० हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थिए । यता, चाँदीको मूल्य पनि प्रतितोला ३० रुपैयाँले घटेको छ । आज चाँँदी ८ ...
एकैदिन १४ सयले घट्यो सुनको मूल्य access_timeभदौ २०, २०७६
सुनको मूल्य शुक्रबार (भदौ २०) पनि घटेको छ । सुन तोलामा एक हजार ४ सय रुपैयाँले घटेर ७२ हजार रुपैयाँ कायम भएको छ । अघिल्लो दिन ७३ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । यता, चाँदीको मूल्य पनि तोलामा ४० रुपैयाँले घटेर ९ सय कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्...
सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट access_timeभदौ १९, २०७६
काठमाडौं– लगातार उकालो लाग्दै आएको सुनको मूल्यमा आज भने सामान्य गिरावट देखिएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाला र तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला रु १०० ले घटेको छ । नेपाली बजारमा छापावाला सुनको मूल्य आज रु ७३ हजार ४०० कायम भएको...
सुन तोलाको ९ सयले घट्यो access_timeभदौ १०, २०७६
काठमाडौं– पछिल्लो डेढ महिनादेखि निकै उतार चढावका बीच कारोवार हुँदै आएको सुनको मूल्य स्थानीय बजारमा सामान्य गिरावट आएको छ । नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज छापावाला सुनको मूल्यमा रु ९०० ले गिरावट आई प्रतितोला रु ७२ हजार ६०० कायम भएको छ ...